Parrot OS 3.0 ikozvino inogona kushandiswa kubva kuRaspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Parrot OS 3.0 ikozvino inogona kushandiswa kubva kuRaspberry Pi
Parrot Kuchengetedza OS 3.0 (Lithium), yazvino vhezheni yenguva yekuparadzira kuita ongororo dzekuchengetedza uye kubira kwetsika, izvo zvatakatotaura nezvazvo pazviitiko zvakawanda pane ino portal, yave kuwanikwa kuti ishandiswe kubva kune inozivikanwa Raspberry Pi SBC. Iyo distro inogona kuiswa pane ARM-yakavakirwa masystem, kushandisa yedu Pi bhodhi senge yakachipa uye inotakurika kubira hub.
Hazvina kutora kwenguva yakareba izvi vhezheni yeRaspberry Pi (ARM) kubva pakatangwa iyo PC vhezheni. Kubva kuFrozenbox Network portal, avo vane basa rekusimudzira kweiyi pentest distro vakatsigira izvi. Kubva pane ino portal unogona kudhawunirodha zvese zviri zviviri PC vhezheni uye iyo Raspi vhezheni (parizvino pane mavhezheni emifananidzo akagadzirirwa Raspberry Pi uye Cubieboard 4), pamwe nekuwana rumwe ruzivo nezve iyo distro iri mubvunzo.
Zvimwe mamwe maviri edhisheni edhisheni yemakomputa ane ARM processors, senge ARMHF midzi uye ARMHF generic midzi. Izvi zvinobvumidza kuti zvishande pane mamwe akawanda maArm-based zvishandiso uye maIoT zvishandiso (kunyangwe kuenderana kuchiri kugona kuvandudzwa zvishoma, sezvo zvisina kuvimbiswa mune dzakawanda kesi). Nekudaro, sezvo ivo varipo muRaspberry Pi uye Cubieboard, ayo ari maviri eSBC-mhando mabhodhi ayo anotengeswa zvakanyanya, kune huwandu hwakawanda hwekuenderana maererano nenhamba yevashandisi.
Zvisinei hazvo isu tichava takateerera kune dzimwe nhau uye kutsigira kuvandudzwa. Uye nenzira, kana mumwe munhu asina kuverenga zvinyorwa zvakapfuura, taura kuti Parrot OS 3.0 ine mazana ezvekushandisa zvekubiridzira, kuongorora kwehunyanzvi, nezvimwe. Iwe une MATE tafura, kunyangwe iwe uchigona kushandisa vamwe. Hwaro hausi chinhu chakaderera pane a Debian 8 ine Linux 4.5 kernel. Simba rese iri rave kugona kucherechedzwa muRaspberry yako Pi sezvatakazivisa, chete kuti zvichaenda zvishoma mvura pane paPC, kunyanya kune mamwe mabasa anoda komputa simba (FLOPS), sekumisikidza mapassword ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Parrot OS 3.0 ikozvino inogona kushandiswa kubva kuRaspberry Pi
Parrot inoshanda muRaspberry 3 asi mumakotesheni, ndinoshamiswa nenhamba huru yevanhu vachitaura kuti chihwenga chinoshanda nemuto mune rasipiberi uye ivo havangori makopi ezvinyorwa kubva kumamwe mapeji ewebhu akatoburitswa neakajekeswa. Tanga system uye inogara mukati mekupinda, iwe unomhanya raspi-config uye kana uchiedza kuisa lightgdm haina kuwana mapakeji mune zvinyorwa uye haikuregi iwe uchibva ipapo, icho chihombe shit.
Ndakaedza akawanda masisitimu eiyo raspibheri uye haashande nemazvo kana makumi maviri muzana, imwe yakadai ... iyo Ubuntu Mate muRaspberry HAHAHA, iyo sisitimu inoenda kunge farts, yakawandisa zvakanyanya, kudzoserwa moto uye kutambisa nguva.
Pamaonero angu, Raspberry chinhu chakanaka uye ine zvakawanda zvinobuda zvekumisikidza iyo agile system yekumhanyisa madiki mafomu, nezvimwewo, asi sezvo mabhatiri asina kuiswa mukushanda neanoshanda masystem, hazvina kukodzera kushandisa mari kubvira makambani mazhinji Ivo vari kufarira kuti komputa iri yakachipa uye ine yemahara system.
3 dzimwe nzira ku Skype yeGnu / Linux
Maitiro ekuisa VMware Player pane yedu Gnu / Linux